Wiil Soomali Taksiile ah oo lagu dilay Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wiil Soomali Taksiile ah oo lagu dilay Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
Wiil Soomaali ah oo Taksiile ka ahaa dalka Mareykanka ayaa toogasho lagu dilay, kadib weerar uu ku qaaday nin kale.
Wiilkan ayaa lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi, waxaana Arbacadii shalay aheyd lagu dilay magaalada Moorhead ee gobolka Minnesota, sida ay sheegeen booliska magaaladaas.
Dilka C/llaahi ayaa loo soo qabtay Willie Sparkman oo ah 18 sano jir, wuxuuna ku eedeysan yahay dillka darajada labaad oo ah mid aan ula kac aheyn, maadaama Sparman qorshihiisa kowaadd uu ahaa inuu dhac iyo baarasho u geysto marxuumka oo ahaa 24-jir sida ay sheegeen Booliska magaalada Moorhad.
Booliska ayaa sidoo kale sheegay in ay eedeysane Sparman oo baxsaday inay ku raad-joogeen kakor inta aanu dilin C/llaahi, maadaama uu dhac ka geysta laba goobood oo kala duwan labadii habeen ee la soo dhaafay.
C/llaahi Maxamed ayaa noqonaya Soomaaligii labaad oo muddo toban maalmood gudahood ah lagu dilay gobolka Minnesota, waxaana todobaadkii hore ay tuugo hubeysan ku dhex toogteenn xawaaladda Taaj ee xaafadda Cedar ee magaalada Minneapolis wiil lagu magacaabi jiray Liibaan Cusman Baqarre.
Previous articleSheekh Shariif: “Waxaan u mahad celinayaa Guddigii Heshiiska iyo Saraakiishii badbaadiyay Dalka..”
Next articleDalalka ugu horeeya dhaqaalaha ee G7 oo War culus kasoo saaray xaaladda Doorashada Soomaaliya